Toyota Corolla 2001 (#676817) ကို South Okkalapa မြို့နယ်... | CarsDB
Lot Number: #676817
Toyota Corolla X 2001model
Engine. 1500cc 2wd X grade
Price. (153သိန်း )ညှို့နှိုင်း ရောင်းမည်
Ac good Tv back camera
အတွင်းခန်း အသားရောင် (စလစ်ကပ်ကားပါ)
မှန်ချိုးမှန်ခေါက် မှန်ချိန် ပါပါတယ် Key remote ပါပါတယ်
တာယာ လေးလုံး အသစ်နီးပါး အလွိုင်း လန်းလန်းလေးထည့်ပေးထားပါတယ်
အတိုက်အခိုက်ကင်းရှင်းပြီး လိုင်စင်ဝေး တောက်လျောက်အနက် ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်ပါ
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) Nyein Ko မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Toyota Corolla 2001 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။
နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ထားသည့်အချိန် 21 ရက်